Warshaddii ugu horreysay ee Oxygen oo laga hirgaliyay dalka | KEYDMEDIA ENGLISH
Warshaddii ugu horreysay ee Oxygen oo laga hirgaliyay dalka
Sida ay sheegayeen masuuliyiinta Wasaaradda Caafimaadka, bilaha soo socdo ayaa la filaa in la daahfuri doono Warashado Kele oo laga hergelinayo Isbitallada DeMartini, iyo Isbitaalo ku yaala Goballada Dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warshaddii ugu horreysay ee Oxygen oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadweynaha uu soo rito, caabuqa COVID-19, ayaa laga furay Caasimadda khamiistii, iyada oo rajo laga qabo in ay si weyn warshaddan hoos ugu dhigto baahida ku aaddanayd Oxygen la’aanta ka jirtay dalka.
Tani iyo markii uu dillaacay Coronavirus, la'aanta qalab neef-siin oo ku filan bukaanka, ayaa sababtay in dadka Afrikaanka ah ee si ba’an ugu baaba’aan COVID-19, sida lagu sheegay daraasad ay daabacday bishii May Jariiradda caafimaadka ee The Lancet, oo soo xigatay xogta 64 isbitaal oo ku yaal 10 dal.
Warshaddan cusub oo laga dhex dhisay xeyn-daabka Isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Benadir, ayay maalgalisay Hormuud Salaam Foundation, oo ay aasaastay shirkadda ugu weyn isgaarsiinta dalka, Hormuud, waxaa la sheegay in 282,000 euro oo u dhiganta ($240,700) lagu maalgaliyay warshaddan.
Soosaarka oksijiinta caafimaad wuxuu u baahan yahay khubaro si ay u shaqeeyaan una ilaaliyaan qalabka. Waxa kale oo ay u baahan tahay koronto la isku halleyn karo iyo sahayda biyaha, oo inta badan isbitaallada dadweynaha Soomaaliyeed aysan haysan.
"Hal xabo ee cylinder oxygen-ka ah, ayaa inta badan ku kacda qiyaastii $50 gudaha Soomaaliya, hayeeshee, waxay gaari kartaa ilaa $400 ama $500 (isbitaallada gaarka loo leeyahay) sababtuna waa yaraanta adeegga," ayuu yiri Cabdullaahi Nuur Cusmaan, Maamulaha Hormuud Salaam Foundation.
In ka badan 20,000, oo kiis oo Caabuqa Coronavirus, ayaa gudaha Soomaaliya laga helay, tan iyo markii uu soo gaaray, ku dhawaad 1200 oo ruux ayaa u geeriyooday, halka ku dhawaad 10,000 oo kale ka caafimaadeen, sida ay sheegtay Wasaaradda caafimaadka Dowladda Soomaaliya.
Kaliya 1% 15-ka milyan ee muwaadiniinta Soomaaliya ayaa si buuxda loo tallaaley, taas oo ka tarjumaysa sinnaan la'aanta qaybinta tallaalka oo Ururka Caafimaadka Adduunku ka digayo in ay sii dheereyneyso masiibada, oo horey u dishay ku dhawaad 5 milyan oo qof adduunka oo dhan.